Bayer: Manangana fototra ho an'ny ovy be dia be - Potatoes News
Bayer - Manangana fototra ho an'ny ovy be dia be
Na mahasalama toy inona aza ireo zavamaniry ao anaty tanimbary ovy, ny herinaratra dia ao anaty tany ary ny porofo dia ao anaty fandavaka. Izany no antony anatanisan'ireo mpamboly ovy ny fiarovana ny faka ho laharam-pahamehana.
Drew Nielsen, mpanolotsaina amin'ny mpanjifa Bayer:
“Tsy manome vola anao ny tampon'ilay zavamaniry. Eo ambanin'ny tany daholo izany. ”
“Ilaina ny faka. Tsy maintsy manana fototra mafy ianao alohan'ny ahafahanao mamorona vokatra. "
Ny famoronana fototra matanjaka dia manomboka amin'ny fihenan'ny tsindry avy amin'ny nematodes. US Department of Agriculture Asehon'ny fikarohana fa ny nematodes dia mety miteraka fihenan'ny 90-isan-jato amin'ny vokatra ovy.
Any amin'ny fanjakana Washington, Michael Hubbard ao amin'ny Hubbard Ag Science, dia mahita ny fahasimbana sy ny vokatra ateraky ny nematodes, indrindra ny Meloidogyne chitwoodi, na ny nematode amin'ny root-knot, ary ny nematode lesion. Lesion nematode no lohalaharana tamin'ny fikarohana natao tato ho ato satria izy io dia mitana andraikitra lehibe amin'ny toeram-ponenana maty aloha.
Michael Hubbard an'ny Hubbard Ag Science:
“Amin'ny ankapobeny, singa iray amin'ny vokatra izy io. Azonao atao ny mahita fihenam-bidy amin'ny root root miaraka amin'ny nematodes-lesion root, fa ny ankamaroany dia mahita singa iray amin'ny vokatra isika rehefa manana nematode root-lesion avo lenta. "
Miaraka amin'ny vokatra 2019, ny mpamboly dia manana safidy betsaka kokoa noho ny hatramin'izay mba hiarovana ireo faka ireo. Ny fitantanana nematodes - ny peste ambanin'ny tany manimba ara-toekarena indrindra, na amin'ny zavamaniry na amin'ny vanim-potoana - dia tena ilaina amin'ny fampitomboana ny rano sy ny fikajiana otrikaina ary ny fihenan'ny aretina. Ireo mpamboly izay mitantana nematodes dia manafoana ny tsindry amin'ny aretina mpanararaotra izay tsy hiditra amin'ny alàlan'ny faka nematodewound.
Jeremy Shuler, mpitantana ny varotra Wilbur-Ellis amin'ny toerana roa ao amin'ny fanjakana Washington, dia nanomboka nanolotra an'i Velum Prime ho an'ny mpanjifany tamin'ny taona 2018. Velum Prime, nematicide / fungisida, dia manome famoretana nematode an-kalamanjana ary manampy amin'ny fitantanana aretina lehibe, anisan'izany ny fivoaran'ny hazavana, fotsy. bobongolo sy ravina Verticillium, singa iray hafa amin'ny famonoana olona efa ho faty.
Jeremy Shuler, mpitantana ny varotra Wilbur-Ellis:
"Betsaka ny fitsapana nataonay tamin'i Velum Prime tamin'ny taona 2017. Ary tamin'ny faran'ny vanim-potoana dia nahita fihenam-bidy izahay tamin'ny antsasaky ny fitsaboana an'i Velum Prime."
Any Idaho, maro ny mpamboly no mampihatra ny Velum Prime ary miverina miaraka amin'i Movento HL avy eo. V + M Solution dia programa fitantanana nematode izay manambatra ny hetsika nematicidal an-tsokosoko an'i Velum Prime miaraka amin'ny fiarovana nematode maharitra an'i Movento hiambenana amin'ny nematodes.
Ny V + M Solution dia niasa tsara ho an'i Kamren Koompin, mpamboly any American Falls, Idaho.
"Ny Velum Prime dia mifanentana tsara tokoa, indrindra ny fanarahana ny nematode lesion amin'ny faka sy ny fifandraisany amin'i Verticillium, izay mety hiseho ho toy ny fatiantoka maty am-piandohan'ny taona amin'ny karazana sasany."
Movento, bibikely famonoana bibikely sy nematicide, dia miasa amin'ny rafitra roa-fomba hanafoanana ny nematodes sy hifehezana ny bibikely mitsentsitra, ao anatin'izany ny psyllid sy aphids. Movento dia mifindra avy amin'ny ravina mankany amin'ny faka mba hiarovana ny zavamaniry iray manontolo, manome fahombiazana sisa tavela izay mipaka amin'ny fitomboan'ny zavamaniry vaovao.
“Movento dia mifanentana tsara amin'ny fandaharan'asa fitantanana peste miaraka ary manampy amin'ny fifehezana psyllid sy aphids. Zebra chip [aretina] dia niseho taona maro lasa izay tany Idaho ary toy izany koa ny psyllid no teo am-piandohan'ny lisitry ny fiambenana rehetra. ”
"Ary, ny fananana izany vokatra nematode fanampiny izany - tombony - miaraka amin'ny Velum Prime amin'ireo saha ireo dia tena manampy amin'ny fahasalaman'ny zavamaniry amin'ny fararano."
Tags: BayerOvy be dia beMpamboly ovy
Mpanamboatra fitaovana fanodinana ovy Kiremko dia manangona vola amin'ny sehatra SAP ERP
Fitaovana teknolojia ambany manampy amin'ny ady amin'ny ovy
AVIKO MANOKATRA FIOMPIANA MOMBA NY FANORENANA PREMIUM FRIAMANITRA HO AN'NY TRANO FIVORIANA